Sida loo sameeyo hubinta amniga ee Google Chrome | Androidsis
Sida loo sameeyo hubinta amniga ee Google Chrome
Xirfadlaha caanka ah ee loo yaqaan 'Google Chrome browser' ayaa soo kordhinayey warar xiiso leh Muddooyinkii ugu dambeeyay, nooca 88.0 waxay ku dartay laba muhiim ah jaleecada. Midka hore waa isu-geynta tabta iyo tan labaad oo ah in la hubiyo amniga codsiga internetka.
Muhiimadda ay leedahay in la cusbooneysiiyo waa mid ka mid ah waxyaabaha sida caadiga ah qaanuunka laga ilaaliyo iyadoo la wajahayo nuglaanta badan, waxaa jira sixitaan badan oo laga heli karo dib u eegistii ugu dambeysay. Hubinta amniga, barnaamijka Google Chrome wuxuu falanqeeyaa saddex qodob oo muhiim ah, falanqeyntu waa deg deg waxayna kaa caawin doontaa inaad hagaajiso dhinacyadaas.
Google Chrome waxaa lagu rakibay malaayiin qalab oo adduunka ah, isbeddelka aaladda wuxuu kudhowaad la siman yahay barnaamijka desktop-ka, sidoo kale horumarintooda. Helitaanka tijaabadaani waxay kugu qaadan doontaa daqiiqad, gaar ahaan inaad heshid cusboonaysiinta cusub.
Saddexda qodob ee xasaasiga ah ee ay falanqeyn doonto ayaa ah Cusbooneysiin, Furayaal sir ah iyo Browsing Amaan ah, waxaa lagugula talinayaa inaad sameyso ugu yaraan hal mar labadii ama seddexdii asbuucba. Marka la eego xaddiga cusbooneysiinta, waxay timaaddaa ugu yaraan mid ka mid ah ku dhowaad labadii biloodba mar, waxaa lagu ogeysiin doonaa inuu jiro nooc cusub markii la hubinayo amniga Google Chrome.
Si loo hubiyo amniga Google Chrome waa inaad sameysaa waxyaabaha soo socda:
Fur barnaamijka Google Chrome qalabkaaga Android
Soo gal saddexda dhibcood ee midigta kore
Guji Deji (calaamadda giraangirta la yaqaan)
Hadda goobaha aasaasiga ah waa inaad ku aragtaa «Hubinta Amniga», haddii aysan ahayn, waxay noqon doontaa lagama maarmaan in la cusbooneysiiyo dalabka ka imanaya Play Store, haddii kale, dhagsii
Waxay ku tusi doontaa qoraal «Chrome kaa caawin kara inaad naftaada ilaaliso ka dhanka ah jebinta amniga xogta, bogagga internetka ee aan ammaanka lahayn iyo wax badan oo dheeraad ah », waxay ku tusi doontaa saddexda ikhtiyaar ee kor lagu tilmaamay
Qeybta hoose ee midigta guji "Hubi hadda" oo hubi dhinacyada ay kuu sheegeyso, waa inaad ku calaamadeysaa laba jeeg oo buluug ah "Updates" iyo "Browsing Safe", Password-ka haddii aad calaamadeysid "i" waa inaad hagaajinta xoogga furaha sirta ah, waad gujin kartaa waxayna kuu geyn doontaa maamulaha furaha si aad u hagaajiso
Doorashadan cusub waxay kuu ogolaaneysaa inaad ilaaliso biraawsarka caanka ah sida ugu macquulsan, ama cusbooneysiinta ama waqtigaaga ku qaad si aad u dhigto erey sir ah. Daaqadaha aaminka ah waa la waafajin karaa, ama ilaalinta caadiga ah ama ka-hortagga la xoojiyay, waxa ay yihiin waa inaad adigu hagaajiso la casharkaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loo sameeyo hubinta amniga ee Google Chrome
WhatsApp ayaa ku ciyaareysa: reload, waxay tirtiri doontaa koontadaada haddii aadan aqbalin asturnaanta cusub
Fasalka Google wuxuu ku dari doonaa qaab offline ah